भर्खरै सकियो लकडाउन बारे निर्णय गर्न बसेको सीसीएमसीको बैठक, गर्यो यस्तो निर्णय ( जानकारीका लागि सेयर गराै) - Public 24Khabar
Home News भर्खरै सकियो लकडाउन बारे निर्णय गर्न बसेको सीसीएमसीको बैठक, गर्यो यस्तो निर्णय...
भर्खरै सकियो लकडाउन बारे निर्णय गर्न बसेको सीसीएमसीको बैठक, गर्यो यस्तो निर्णय ( जानकारीका लागि सेयर गराै)
भर्खरै सकियो लकडाउन बारे निर्णय गर्न बसेको सीसीएमसीको बैठक, गर्यो यस्तो निर्णय Kathmandu Nepal.
भर्खरै सकियो लकडाउन बारे निर्णय गर्न बसेको सीसीएमसीको बैठक: सीसीएमसीको बैठकले सबै देशहरुमा उडान अनुमति दिदै जाने निर्णय गरेको छ । सीसीएमसीले आज विभिन्न क्षेत्रबाट आएको सुझावहरुबारे छलफल गरेको हो । उपत्यका मेयर्स फोरमले कम्तिमा दुई साता लकडाउन गर्न सुझाव दिएको थियो ।
विवाद थामथुम पारेर बढ्दा फेरि उही द्वन्द्वका शृङ्खला चल्ने जोखिम हुन्छ । ओलीले सरकार चलाउन नदिएको आरोप लगाउने, प्रचण्डहरू पार्टी र सरकारबीच समन्वय नभएको प्रत्यारोप लगाउने । अब यो सिलसिला तोडिनु नै नेकपा र मुलुकको हितमा छ । त्यसकारण ओलीले चौथो विकल्प रोज्दा राम्रो हुन्छ । उनले यो विकल्प रोज्ने सम्भावना कम छ । यद्यपि यो उनको चार दशक लामो राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा उम्दा निर्णय हुनेछ । यसो हुन सके राजनीतिक दाउपेचमा प्रचण्डलाई समेत रिँगाउन सफल भनिएका ओली ‘अब्बल’ नेताकै रूपमा स्थापित हुनेछन् । Ekantipur बाट साभार
Previous articleहेर्नुहोस्, र’णभूमिजस्तै बन्यो बर्दिवास प्रहरीको गो’ ली लागेर ३ जना ढ’ले, र’गतको (भिडियो हेर्नुहोस्)
Next articleएकाबिहानै बर्दिबासमा ड’ रलाग्दो प्रहरीको गो ‘ली लागेर १ जनाको मृ’ त्यु, लखेटीलखेटी टाउकोमा गो’ ली !!